Ihe eji eji akwụkwọ mposi ARCORA nwere shelf maka ekwentị mkpanaaka - arcorarobinet
Welcome / ngwa / Ime ụlọ ịwụ / ARCORA Akwụkwọ mposi na-ejide ihe na ekwentị mkpanaaka shelf
Ihe eji eji akwụkwọ mposi ARCORA nwere shelf ekwentị
Igwe anaghị agba nchara mposi akwụkwọ njide Modern Sleek Design: nchara nchara Nickel okokụre, fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ị chọrọ ihe ndozi, na-enye usoro zuru oke maka imepụta akara mkpịsị aka nke oge a.
Na-agbakwunye ọmarịcha mma ma belata nhicha na-eweta nsogbu. Nhazi usoro n'elu shelf na-egbochi ihe ịmịpụ.
Akụkụ nke onye na-ejide akwụkwọ mposi 4010301 nwere obere:
1. Mere nke oké 304 igwe anaghị agba nchara na mirror polishing usoro, bụ onwunwu na-egbu maramara Hichaa elu nke mama. Nke mkpụrụ ga-akọrọ, enweghị ájá, waks na griiz. Kanye akara ebe ị chọrọ n'elu ihe gị na njikọta njikọta tupu echichi. Iho mmanu na gluu na azu nke ihe. Wepu ihe nchebe nke ihe mmado a na ihe ahụ. Dabere na ihe mgwakota agwa ahụ, wee pịa ya maka ihe ruru. Nkeji 3 ruo 5. Gluu nke abụọ gluu na ihe. Emegharịrị ihe ahụ mgbe ịwụnyechara. Tupu i jiri ya, chere ọ dịkarịa ala awa 48 (karịa oge 3-5) maka gluu iji kpoo kpamkpam.
1. Odighi adabara agba aja aja, chalky mgbidi, nzụlite ma obu ihe ndi ozo di nro.
2. Ọ bụrụ na ị maghị ma ngwaahịa anyị ọ na-anabata maka elu gị, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ndị ọzọ, biko kpọtụrụ ndị ahịa anyị.
3. Enwere ike iji mma wuchaa nrapado ahụ mgbe akọrọ. Biko chere ruo mgbe disassembly tupu nrapado ahụ ejupụta.
4. Oge oge ihicha na-agbatị mgbe iru mmiri dị n'ime ụlọ ahụ dị elu. Biko chere elekere 48 ma ọ bụ karịa tupu iji ya.
5. Enwere ike iwunye akuku abuo n’ihu ọha
- Nha: 18cm * 19cm * 12cm
- Arọ: 680g
- ikike ibu: 9kg
- Ihe: igwe anaghị agba nchara
- N'elu: nickel na-egbuke egbuke
- Mountzọ mgbago: mmechi akpaka, mgbatị mgbidi
Erlọ akwụkwọ mposi nwere shelf
Mgbidi mgbidi na ihe nzuzo